Jaamacadda Kanada Si Loo Baadho Sida Xashiishku Uga Caawin Karo La Dagaalanka Kansarka Eeyaha • Daroogooyinka Inc.eu
Sababta oo ah dareenka adag ee urta, eeyaha waxaa mararka qaar dhakhaatiirta u adeegsata ogaanshaha cudurada. Tusaale ahaan in lagu ogaado kansarka. Nasiib darrose, asxaabta afarta lug leh laftooda ayaa waliba ku dhici kara cudurkan naxdinta leh. Taasi waa sababta jaamacad ku taal Kanada oo ku taal Ontario ay u bilowdey daraasad saddex sano ah daaweynta daroogada cannabis eeyaha qaba kansarka.
War-saxaafadeed ka soo baxay Ontario Veterinart College (OVC) ayaa lagu xusay in cilmi-baaristu "ay tilmaami karto waddada lagu daweyn karo xayawaanada xayawaanka ah." Horumar weyn. Cilmi-baaristu waxay diiradda saaraysaa maaddada aan-nafsiga ahayn cannabidiol iyo saamayntooda kansarka kaadiheysta eeyaha. Nooc ka mid ah kansarka xayawaankaan.
Cilmi-baarista Professor Hocker waxaa maalgeliyey Gray Wolf Animal Health, oo ah shirkad caafimaadka xoolaha ka shaqeysa oo u heellan daryeelka xayawaanka ee Kanada. Jeff Wichtel, Dean oo ka tirsan OVC: "Dhakhaatiirta xoolaha iyo milkiileyaasha xayawaanku waxay ku faraxsan yihiin macluumaadka ku saabsan isticmaalka caafimaadka ee xashiishka," ayuu yiri Wichtel, "Shaqadan aasaasiga ah waxay naga caawin doontaa inaan wax badan ka ogaano doorka cannabinoids kansarka oo horumarin doona qaybtan cilmi baarista caafimaadka ee Kanada. Tan waxaa laga akhrisan karaa bogga Dogzine.
Kansarka kaadiheysta eeyaha way adagtahay in qalliin looga saaro. Hocker wuxuu rajeynayaa in natiijooyinkiisa daraasadda ay ka caawin doonaan cilmi-baarayaashu inay horumariyaan daweynta kansarka eeyaha. Hocker wuxuu noqon doonaa saamaynta CBD khadadka unugyada kansarka kaadi haysta. Wuxuu rajeynayaa inuu ogaado in walaxdu disho unugyada kansarka iyo sida ay u shaqeyso, oo ay ku jiraan haddii howshu ku lug leedahay soo-dhoweynta endocannabinoid oo si dabiici ah ugu dhaca jirka. Wuxuu sidoo kale eegi doonaa saameynta isticmaalka CBD oo ay weheliso shucaaca iyo kiimoteraabiga. Cilmi-baaristani waxay sidoo kale u horseedi kartaa habab daaweyn wanaagsan oo loogu talagalay kansarka kaadiheysta ee dadka.
Akhri wax dheeraad ah dogzine.nl (Xigasho)
Kanadiyaanku waxay ku qarash gareeyaan hal bilyan doolar cannabis sharci ah 2019
Sannadkan, Kanadiyaanka waxay ku bixiyeen ku dhowaad $ 908 milyan (CAD), in ka badan 600 milyan oo euro, xagga sharciga ...
Xashiishada iyo xashiishadda cannabis guriga miyuu hadda sharci ku yahay Talyaaniga?
Maxkamadda Sare ee Talyaaniga ayaa dhawaan xukuntay in xaddiga yar ee xashiishka ee guryaha ku kora ay sharci tahay…
Mashruucan wuxuu hayaa jawaabaha 3
henriette ayaa qoray:
5 November 2019 ee 01: 52
Kaliya waxaan jeclaan lahaa inaan kugu wargaliyo ku saabsan Cairn Terrier oo laga helay cudurka kansarka dhuunta sanadkii hore.
Xaydhkaygu wuxuu ii sheegay inuusan noolaan doonin ilaa Kirismas, laga yaabee inuu xoogaa ka dheer yahay haddii uu qaadan lahaa kemotherapy.
Uma aanan dooneynin taas nafsadeyda isla markaana u dhigma tan eeygayga.
Waa inaan kuu sheegaa inaan helay waqti aad u adag si aan u ogaado waxa iyo inta saliid ah ee aan bixin karo
wax yar oo liita sidaa daraadeed waxaan runtii ku qasbanahay in aan ku darsado waxa aan siin karo maxaa yeelay isagu waa kaliya
eey aad u yar oo culeyskiisu yahay 7 kilos. Waxaan ku noolahay Boortaqiiska iyo Cannabis waa gabi ahaanba Maya Maya halkaan.
Sikastaba… Waxaan isku dayay THC iyo CBD labadaba. Aniga oo ka bilaabaya THC iyo markii uu xoogaa dareemay ayaan isku dayay
in loo beddelo CBD.
3 toddobaad ka hor wuxuu sameeyay baaritaan oo kansarka wuu dhammaaday laakiin weli wuu nool yahay wuuna harkaanayaa, xanuun majiro
waana ku faraxsanahay, aniga sidoo kale. Aad ayaan uga xumahay in uusan jirin baruur halkan ku siin doonta Cannabis eey mana jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo.
daroogada ayaa qoray:
5 November 2019 ee 13: 01
Gacaliye Henriette, aad ayaan kuugu faraxsanahay inaan kaa maqalno inaad isku dayday oo ay u shaqeyneysay eeygaaga. Waad ku mahadsan tahay inaad na ogeysiiso waxaanan u rajeyneynaa adiga iyo eeygaaga dhammaantiin sida ugu wanaagsan!
Андрей ayaa qoray:
23 Juun 2020 ee 14: 45
Классная статья, интересно было прочитать, видно что автор хотел преподнести, так же неплото бые